ယ‌သော်‌ဓရာ | သာသနဝိပုလ
<i class="fa fa-home"></i> မျက်နှာစာ
ဘုရား‌လောင်းရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်‌အဖြစ်‌သိထားတဲ့ ယ‌သောဓရာအ‌ကြောင်း‌လေး နည်းနည်း‌ပြောကြည့်ချင်‌လို့ပါ။
ဒေဝဒဟပြည်ရဲ့ သုပ္ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးရဲ့ သမီးပါ။
သူ့မှာ သုံးနှစ်လောက်ငယ်တဲ့ ဒေဝဒတ္တဆိုတဲ့ မောင်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်
နာမည်‌က ဘွား‌တော်‌ရဲ့ နာမည်‌ကိုယူပြီး‌ပေးထားတာပါ။
စာလုံး‌ပေါင်းသတ်‌ပုံကို‌တော့ ယ‌သော်‌ဓရာ|ယ‌သောဓရာဆိုပြီး ၂မျိုး‌တွေ့ ရပါတယ်‌။
နာမည်‌အရင်းက‌တော့ ဘဒ္ဒကစ္စနာ|ဘဒ္ဒဉ္စနာ လို့‌ခေါ်ပါတယ်‌။
ဘုရား‌လောင်းနဲ့ ပါရမီများစွာကို အတူတူဖြည့်ခဲ့လို့ ဘုရားအ‌ကြောင်း‌ ပြောတိုင်း ယ‌သော်‌ဓရာက ကျွဲကူး‌ရေပါဆိုသလို အမြဲပါပြီးသားပါပဲ။
ဒီထဲကမှ စာ‌ပေမှာ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်‌‌နေတာ‌လေး‌တွေရယ်‌နဲ့
၁။ဗုဒ္ဓက သားမယားကိုပစ်‌ပြီး ‌တောထွက်‌သွားတာ လင့်ဝတ္တရားမ‌ကျေပွန်‌ ဘူးလို့ ဆိုလို့ရတာ‌ပေါ့ ?
၂။ဗုဒ္ဓ ‌တောထွက်‌သွားတဲ့အချိန်‌မှာ သူ့မိန်းမက ‌နောက်‌အိမ်‌‌ထောင်‌မပြုပဲ ဘာလုပ်‌သလဲ ?
၃။ဗုဒ္ဓ တိုင်းပြည်‌ကို ပြန်‌လာတဲ့အချိန်‌မှာ ယ‌သော်‌ဓရာကထွက်‌မ‌တွေ့လို့ ဗုဒ္ဓကဝင်‌‌တွေ့ရတယ်‌ဆိုတာ ဘာသ‌ဘောပါလဲ ?
၄။ယ‌သော်‌ဓရာက ‌ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေ‌ထောက်‌ကိုကိုင်‌တာ ငိုတာ နမ်းတာ‌တွေကျ‌တော့‌ရော ဗုဒ္ဓက အပြစ်‌မဖြစ်‌ဘူးလား ?
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးအသချေင်္နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလတုံးက ရမ္မဝတီမြို့မှာ
ဂေါတမဘုရားလောင်း သုမေဓာရသေ့နဲ့အတူ နိယတဗျာဒိတ်ရရှိခဲ့တဲ့
သုမိတ္တာဆိုတဲ့ ပုဏ္ဏားမျိုးနွယ် မိန်းမပျိုကလေး ဘဝက အစပြုခဲ့တာပေါ့ ။
ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွချိန်မှာ သုမေဓာရှင်ရသေ့က ကိုယ်ကိုဝပ်စင်း တံတားခင်းပြီး နိယတဗျာဒိတ်တော်ခံယူနေချိန်မှာ ဒီရသေ့ကို အလွန်လေးစားအားကျ ချစ်ခင်ကြင်နာပြီး ငါအသက်ရှင်ရကျိုး နပ်ပြီ။ ရသေ့လေးကိုယ့်ကောင်းကျိုးကိုယ် အားထုတ်သလို ငါလည်း အားထုတ်မယ်။ ငါဟာ အတိတ်ကံကြောင့် မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုသလို ဒီလိုစိတ်ဓာတ် ထက်မြက်တဲ့ ရသေ့ကိုလည်း ကြည်ညိုတယ်။ ငါ့မှာ လှူစရာကလည်း မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ့် ကြာပန်း ၈ခိုင်ပဲ ရှိတယ် ဆိုပြီး ကြာ ၅ခိုင်ကို ရသေ့ဆီလှူ ကြာ ၃ခိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြီး ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံယူပါတယ်။
ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားက သုမိတ္တာရဲ့ ဘဝါဘဝက ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့ပါရမီတွေကိုကြည့်ပြီး ဘုရားလောင်းရဲ့အကျိုးအတွက် တူမျှတဲ့စိတ်ရှိတယ်၊ တူမျှတဲ့ကောင်းမှုကံရှိတယ်၊ တူမျှတဲ့လုပ်ရပ်တွေရှိမယ်။ ဘုရားလောင်းကို ကာယကံရော ဝစီကံနဲ့ပါ ချစ်လိမ့်မယ်။ ဒီမိန်းကလေးဟာ ရှုချင်စဖွယ် ချစ်စဖွယ် ရှိမယ်။ စိတ်နှလုံးကို ပွားစေတတ်သူ၊ ချစ်စဖွယ်စကားကို ပြောဆိုတတ်သူဖြစ်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့တရားကို အမွေခံသူ၊ တန်ခိုးကြီးသူ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရှင်ရဲ့ ဘဏ္ဍာကို အမြဲစောင့်ရှောက်သလို ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်း စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။ ခြင်္သေ့မင်းဟာ နှောင်အိမ်ချိုင့်ကို ဖျက်ဆီးသလို အာသဝေါတရားတို့ကို ဖျက်ဆီးပြီး (သာဝက) ဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိလိမ့်မယ်...။ လို့ နိယတဗျာဒိတ်တော် မြွက်ကြားတယ်။
ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ ဒီပင်္ကရာ ဘုရားထံမှာ မတွေ့ခင်ကတည်းက ပါရမီ အတူ ပြုခဲ့တာကိုတော့ သဘောပေါက်လောက်ပါတယ်။ ကျမ်းအားလုံး တညီတညွတ်တည်းဆိုတာကတော့ အသင်္ချေ ၂၀ရဲ့အထက်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ယ‌သော်‌ဓရာဟာ ဘုရားလောင်းနဲ့အတူ ပါရမီဖြည့်တာ အနည်းဆုံး အသင်္ချေ ၂၀လို့ ယူဆရပါမယ်။ ရာဟုလာမယ်တော်ဖြစ်ဖို့ ဒီပင်္ကရာဘုရားဆီမှာတစ်ခါ နိယတ ဗျာဒိတ်ရတယ်။ မဟာဘိညာဧတဒဂ်ဘွဲ့ရဖို့ ပဒုမုတ္တရဘုရားဆီမှာတစ်ခါ နိယတဗျာဒိတ်ရတယ်။ ဘုရားလောင်းအတွက် သူဟာအများကြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ ကုသိုလ်ကံတွေ များစွာ မရေမတွက်နိုင်အောင် ပြုခဲ့တယ်။ ဘုရားလောင်းအတွက်လည်းပြုပေးတယ်။ မလျောက်ပတ်တာကို ရှောင်ကြဉ်တယ်။ မကျင့်သင့်တာကို တားမြစ်တယ်။ ဘုရားလောင်းအတွက်ဆို အသက်ပါစွန့်တယ်။ ကုဋေအထောင်မကတဲ့ဘဝပတ်လုံး သူတပါးမယားအဖြစ် လှူတာ ခံရတာတောင် ဘုရားလောင်း အတွက် ပါမီဖြည့်ပေးတာပါပဲဆိုပြီး စိတ်ထားမဖောက်မပြန် လိုက်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်အဖြစ်၊ အစားအစာအဖြစ် ပေးလှူတာကိုလည်း အသက်စွန့်တဲ့အထိ ပါရမီဖြည့်တယ်။ ဘုရားလောင်း အတွက်အသက်စွန့်တယ် ဘေးလွတ်ရာရဖို့ အသက်စွန့်တယ်။ ခြေလက်အင်္ဂါ တန်ဆာဆင်အပ်တဲ့ အဝတ်အမျိုးမျိုး များစွာသောမိန်းမတန်ဆာ စတာတွေကိုလည်း မလျှို့ဝှက်ခဲ့ဘူး။
ဘုရားလောင်းအတွက်နဲ့ ဥစ္စာစပါး၊ ရွာနိဂုံး၊ လယ်ယာ၊ သားသမီး၊ ဆင်မြင်း၊ ကျွန်အလုပ်အကျွေးတွေ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာ မရေနိုင်ဘူး။
လှူမယ်လို့ လာတိုင်ပင်လို့လည်း ကုန်မှာကြောက်တဲ့ စိတ်မဖြစ်ဘူး။
ဘုရားလောင်းကို ပါရမီကူဖြည့်ရလို့ သံသရာမှာ အထူးထူးအပြားပြား
ဒုက္ခပေါင်းများစွာ ခံစားရတာလည်း မရေနိုင်ဘူး။
ဗြဟ္မဒေဝ၊ ဂေါတမ(အရင်က) အစရှိတဲ့ ဘုရားပေါင်း ကုဋေတစ်သိန်းရှစ်ဆယ့်ငါးဆူကိုလည်းကောင်း၊
ရှစ်ထောင်ငါးရာ သုံးဆယ့် ခုနစ်ကုဋေကိုလည်းကောင်းသူ ဖြတ်သန်းပြီး ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်။
လေးအသချေင်္နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းမှာမှ ဘုရားပေါင်း ၂၄ဆူပဲ တွေ့ရတာဖြစ်လို့ အခုလောက်ဘုရားတွေကိုဖူးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ အသချေင်္ပေါင်းဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်သလဲ
[ဒါတွေက ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်ကပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေပါ
လေးအသချေင်္နဲ့ ကမ္လာတစ်သိန်းကာလမှာ ဘုရားပေါင်း ၂၄ဆူပဲတွေ့ရလို့
အသချေင်္အနန္တ ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရသလဲ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်
(လေးအသင်္ချနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ အသင်္ချေ၊ ကမ္ဘာ တွက်ပုံတွေကို
ဘုရားဘာကြောင့် အကုန်သိသလဲ ရှင်းတမ်းပို့စ်မှာ တွက်ပြပြီး)]
အလောင်းတော် တောထွက်ပြီးနောက်တစ်နေ့ ဆန္နအမတ် မြင်းတန်ဆာတွေပိုက်ပြီးမျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ ပြန်လာလို့ အကြောင်းစုံ သိရတော့အလောင်းတော်ရဲ့နောက်ကို လူလွှတ်ပြီး အမြဲစုံစမ်းခိုင်းတယ်။
အလောင်းတော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မပျက်စေရဘူး။
သူလည်း ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝတ်ပဲ ဝတ်တယ်။
သူလည်း ထမင်းတစ်ထပ်ပဲ စားတယ်။
သူလည်း ကြိုးပြားနဲ့ရက်တဲ့ ညောင်စောင်းနဲ့ပဲ အိပ်တယ်။
အလောင်းတော်က ပန်းနံ့သာတွေ ရှောင်ကြဉ်တယ်ဆိုရင်
သူလည်း ပန်းမပန်ဘူး နံ့သာမလိမ်းဘူး။
အလောင်းတော် တောထွက်သွားချိန်မှာ မင်းညီမင်းသား သူတပါးတွေက
‌မြှောက်‌စား မြတ်‌‌လေး ‌ကောင်းမွန်‌စွာ ‌မွေးမြူလိုပါတယ်‌လို့ သဝဏ်‌လွှာပါးကြ‌ပေမယ့် ဘယ်‌သူ့ကိုမှ ‌ဂေဟဿိတ ‌ပေမတဏှာနဲ့ ပြန်‌လှန်‌‌စောင်းငဲ့လို့‌တောင်‌ တစ်‌ချက်‌မကြည့်ခဲ့ဘူး။
ယ‌သောဓရာဆိုတာ ဘုရား‌လောင်း နန်း‌တော်‌အိမ်‌မှာ စံမြန်းစဉ်‌က တစ်‌ဦးတည်း‌သော ကြင်‌ယာ‌တော်‌ပါ။
သာကီဝင်‌မင်းမျိုးတစ်‌ဦးဖြစ်‌ပြီး မိန်‌းမမြတ်‌လက္ခဏာနဲ့ ပြည့်စုံသူတစ်‌ဦးပါ။
-ပိတုံး‌ရောင်‌တဖိတ်‌ဖိတ်‌‌တောက်‌ပြီး သားလှီးဓားလို အဖျား‌ကော့တဲ့ ဖြန့်ချရင်‌‌ခြေဖ‌နောင့်ထိကျတဲ့ ဆံပင်‌ရှိတယ်‌
-‌ခြေဖဝါး လက်‌ဖဝါး နှုတ်‌ခမ်းသား‌တွေက ခို‌ခြေအဆင်းလို ရဲရဲ‌တောက်‌ပြီး
တစ်‌ကိုယ်‌လုံးက ‌ရွှေဝါ‌ရောင်‌ တဖိတ်‌ဖိတ်‌‌တောက်‌တဲ့ အသားအ‌ရောင်‌ ပိုင်‌ရှင်‌ပါ
-အသက်‌‌သေတဲ့အထိ ၁၆နှစ်‌သမီးလို့ထင်‌ရ‌လောက်‌‌အောင်‌ ပါး‌ရေနား‌ရေမတွန့်တဲ့အထိလှပသူပါ
-အရိုး‌ကောင်းလွန်းလို့ ‌သွား‌လေး‌တွေဟာ ခရုသင်းကို လွှနဲ့အက်‌ပြီး ပြန်‌ဆက်‌ထားသလို အ‌ပေါက်‌အကြား အ‌ခေါအကုပ်‌ မရှိသူပါ . ခြေ‌ချောင်း လက်‌‌ချောင်‌း‌လေး‌တွေဟာ ဖ‌ယောငးတိုင်‌လိုပဲ အရိုး‌ကောင်းလို့ အဆစ်‌မဖုဘူး ‌ဖော့ဖ‌ယောင်းလို ‌ပျော့‌ပြောင်းတဲ့သူပါ
-အရွယ်‌ကလည်း ဘယ်‌အချိန်‌ကြည့်ကြည့် ၁၆နှစ်‌လို့ ထင်‌ရတဲ့သူပါ
-ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါအနေနဲ့ ကာမဘုံကို ကျော်လွန်ပါတယ်။
သာမန်လူတွေမဆိုထားနဲ့ နတ်ပြည် ၆ထပ်က နတ်တွေတောင်ယှဉ်လို့မရအောင် လှတဲ့သူပါ
-ရုပ်အဆင်းလှသူ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာရှိသူ၊ အခြွေအရံများပြားသူ၊ အလုံးစုံ‌သောကိုယ်အင်္ဂါပြည့်စုံသူ၊ အမျိုးတို့၌ အပူဇော်ခံရသူ ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေအပြင် သီလရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
-လောကဓံနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး
-အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဘေးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး
ယသောဓရာဟာ သာမဏေပြုထားတဲ့ ရာဟုလာကိုလူထွက်အောင်ပြန်လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာ
ဘုရားက အလွန်ဆန်းကြယ်တဲ့ ကာမာဒီနဝ နေက္ခမ္မာနိသံသ ဓမ္မကထာကိုဟောကြားပေးလိုက်လို့
သံသရာကိုငြီးငွေ့ပြီး အိမ်ရာတည်ထောင် လူ့ဘောင်ကို စွန့်ခွာပြီး အိမ်ရာမထောင် သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ခဲ့တယ်။
ဘုရားထက် ၃နှစ်အသက်ကြီးတဲ့ အဖေတူအမေကွဲ အစ်မအရင်းဖြစ်သူ (သုဒ္ဓေါဒနနဲ့ဂေါတမီရဲ့သမီးကြီး)
ဇနပဒကလျာဏီထေရီထံမှာ အခြွေအရံ မောင်းမ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်နဲ့အတူ ရဟန်းပြုခဲ့တယ်။
သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီး လခွဲမတိုင်ခင်ပဲ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ရရှိလို့ ရဟန္တာထေရီမတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
လာခြင်းကောင်းသော လာခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။
ဆွမ်း သင်္ကန်း ကျောင်း ဆေး ပစ္စည်းလေးပါးလာဘ်လာဘဟာ သမုဒ္ဒရာက လှိုင်းတပိုးလိုပဲပေါများတယ်
မြတ်စွာဘုရားထံမှာ သုံးပါးသောဝိဇ္ဇာကို အစဉ်ရောက်အပ်ပြီ
ယခုနောက်ဆုံးဘဝ အလုံးစုံသော အာသဝတို့ ကုန်းခမ်းပြီ၊
အတ္ထပဋိသမ္ဘိဒါ၊ ဓမ္မပဋိသမ္ဘိဒါ၊ နိရုတ္တိပဋိသမ္ဘိဒါ၊ ပဋိဘာနပဋိသမ္ဘိဒါတွေပြည့်စုံပြီ။
ရှေး၌နေဖူးသမျှ ခန္ဓာအစဉ်ကို သိတယ်ဆိုတဲ့ အဘိညာဉ် ၆ပါးနဲ့
၈ပါးသော ဝိမောက္ခတွေကိုပါ မျက်မှောက်ပြုပြီ
မဟာသာဝကကြီးတွေ အလွန်ဆုံးသိမှ ကမ႓ာတစ်သိန်းပဲသိတယ်။
ယသောဓရာထေရီကတော့ အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မောဂ္ဂလာန် အဂ္ဂသာဝကကြီးနှစ်ပါးကို
ဒီလိုသိတာ အရှင်ဗာကုလမထေရ်ရောပါမှ တစ်သာသနာလုံး ဒီလေးပါးပဲသိတယ်။
အရှင်မ ယသောဓရာထေရီက မဟာသာဝကတွေရော၊ မဟာသာဝိကာ တွေရော၊ အဂ္ဂသာဝိကာတွေထက်ပါကျော်လွန်ပြီး သိပါတယ်။
ဘယ်လိုသိသလဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ ပုဗ္ဗေနိဝါသဉာဏ်အရာမှာ တခြားရဟန္တာတွေထက် လွန်လွန်ကဲကဲပိုပြီးသိတယ် ပဋိလောမအနေနဲ့ နောက်ပြန်တွက်ရင် တစ်အသင်္ချေ နှစ်အသင်္ချေ လေးအသင်္ချေ တစ်ဆယ့်ခြောက်အသချေင်္ကာလတွေကို တစ်ခုတည်းသောအာဝဇ္ဇန်းရှိတဲ့ ဝီထိစိတ်အစဉ်နဲ့တပြိုင်တည်းပြန်မြင်နိုင်တယ်။
ယသောဓရာထေရီကို ဒီမဟာဘိညာဧတဒဂ်ရာထူး သာဝတ္ထိပြည်မှာပေး ခဲ့တယ်။
ယသောဓရာထေရီမဟာ သက်တော် ရ၈နှစ်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့ပါတယ်
ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ့်နေ့မှာ ယသောဓရာထေရီမဟာ ပဇာပတိဂေါတမီအစရှိတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ သာဝကကြီးတွေရော
သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးစတဲ့ ရဟန္တာပေါင်းများစွာဟာ ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာပဲ ဆီးမီးလျှံတွေငြိမ်းသလို
နိဗ္ဗာန်ကို စံဝင်တော်မူကြကုန်ပြီ ငါလည်းဘုရားရှင်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ဆိုပြီး
ကျောင်းကနေထွက် သပိတ် သင်္ကန်းကိုယူ ရဟန်းမတစ်သိန်း ခြံရံပြီး ဘုရားထံကို ချဉ်းကပ်တယ်။
ဘုရားကိုကန်တော့ပြီး ခြေရင်းနားမှာထိုင်ရင်းနဲ့ အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်သည် အသက် ရ၈နှစ်ရှိပါပြီဘုရား
ကုန်းကိုင်းတတ်တဲ့ ပဗ္ဗာရဒသကအရွယ်ကို ရောက်နေပြီဘုရား တပည့်တော်အသက်သည် နည်းလှပါသည်ဘုရား
အရှင်ဘုရားတို့ကို စွန့်ခွာရပါတော့မည်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် မိမိကိုယ်ကို ကိုးကွယ်ရာပြုချိန်တန်ပါပြီဘုရား
ယနေ့ ညဉ့်မှာပဲ ရင့်ခြင်း အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်မှာ အသင်္ခတဓာတ်သီးသန့်သာ
စံမြန်းရပါတော့မည်ဘုရား အကြင်မျှလောက်သော ပရိသတ်တို့အပေါ်မှာ အပြစ်ရှိခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ
မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလည်း သံသရာတစ်လျှောက် ချွတ်ချော်မှုရှိခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။
ဘုရားက တန်ခိုးကိုပြခဲ့ဦး ယုံမှားခြင်းကို ဖျောက်ခဲ့ဦးလို့ ဆိုတဲ့အတွက် ဘုရားကို ရိုရိုသေသေကန်တော့ပြီး (အထက်မှာပြခဲ့တဲ့)အတိတ်ဘဝတွေအကြောင်း
ဒီဘဝအကြောင်း သူ့မှာရှိတဲ့ အစွမ်းတွေအကြောင်းပြောပြီး နတ်ခိုးပြတော်မူတယ်
တစ်မျိုးနှစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး အထူးထူးအပြားပြား ကြီးမားလှတဲ့တန်ခိုးမျိုးစုံကိုပြတယ်
အတောင် ၂ဘက်က အရှေ့အနောက် ကျွန်းတွေလောက်ရှိတယ်
အတောင်ပံလေးတွေက အသီးအသီးသော အခက်နဲ့တူတယ်
ဇမ္ဗူ့သပြေကို အမြစ်အရင်းနဲ့တကွ နှုတ်ပြီးယပ်ခတ်ရင်း ဘုရားနားမှာလာထိုင်တယ်
ထိုင်နေရင်းကပဲ ဆင်အသွင် မြင်းအသွင် တောင်အသွင် နေအသွင် လအသွင် သမုဒ္ဒရာအသွင်
မြင်းမိုရ်တောင်အသွင် သိကြားမင်းအသွင် အမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းပြတယ်။
စက္ခုငါးမျိုးရှိသောမြတ်စွာဘုရား အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အစုံကို ရှိခိုးပါ၏
လောကဓာတ်တစ်ထောင်တို့ကို ပဒုမ္မာကြာတို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ခဲ့ပါ၏
ဆိုပြီး ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကိုချီးကျူးလိုက် သူယသောဓရာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်
ဘုရားရဲ့ခြေအစုံကိုကန်တော့လိုက် တန်ခိုးဖန်းဆင်းပြလိုက် ပြပြန်တယ်
ဗြဟ္မာအသွင်ဖန်ဆင်းပြီး သင်္ခါရတို့ဆိတ်သုဉ်းတဲ့ သုညတ နိဗ္ဗာန်တရားကို
ပြီးတော့မှ အရှင်ဘုရား ... အကျွန်ုပ်သည် ကိလေသာတို့ကို လောင်ကျွမ်းစေခဲ့ပါပြီ ဘုရား
အနှောင့်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ ဆင်မကဲ့သို့ အာသဝမရှိပဲနေခဲ့ရပါပြီဘုရား
မြတ်စွာဘုရားထံပါးမှာ ဝိဇ္ဇာသုံးပါးကို အစဉ်ရောက်အပ်ပါပြီ အဆုံးအမကို လိုက်နာကျင့်သုံးအပ်ပါပြီ
ပဋိသမ႓ိဒါ လေးပါး၊ ဝိမောက္ခ ရှစ်ပါး၊ အဘိညာဉ် ခြောက်ပါးတိုကိုလည်း မျက်မှောက်ပြုအပ်ပါပြီ
ဆင်းရဲ ချမ်းသာနဲ့ ပက်သက်လို့ စင်ကြယ်တဲ့အဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ
အကြင်မိန်းမတို့သည်(မောင်းမတွေကိုရည်ညွှန်း) မြတ်စွာဘုရား၏ကောင်းမေ၏အကျိုးငှာ မိမိကိုယ်ကို
ပေးလှူကြပါကုန်သည် ထိုမိန်းမ၏(ယသောဓရာကိုရည်ညွှန်း) အဖော်ခင်ပွန်းပြည့်စုံခြင်းကို ဖြစ်ကြပါသည်
အကြောင်းတရားလေးပါးတို့ ပြုပြင်ခြင်းမရှိသော ရောက်အပ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရပါပြီ
အကျွန်ုပ်တို့မှာ အတိတ် ပစ္စုပ္ပန် အနာဂါတ်ဆိုတဲ့ အလုံးစုံသောကံတို့ ကုန်ပါပြီ စက္ခုငါးမျိုးရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား အရှင်ဘုရား၏ ခြေတော်အစုံကို ကန်တော့ပါ၏ဆိုပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ့်အကြောင်း လျောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားက ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့အတွက်လာလျှောက် ကြတဲ့ သင်တို့ကို လွန်ပြီး ဘာပြောစရာရှိမလဲပြုပြင်စီရင်မှုမှ ငြိမ်း အေးသော အမြိုက်နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြပါလို့ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ်...
ယသောဓရာထေရီပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်မှာတော့ အတူရဟန်းပြုခဲ့တဲ့ အခြွေအရံမောင်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရဟန်းမ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ပါ တပြိုင်တည်း ပရိနိဗ္ဗာန်စံခဲ့ကြတယ်
မေးခွန်း ၁မှာမေးထားတဲ့ တောထွက်သွားလို့ လင့်ဝတ္တရားမကျေပွန် ဘူးလားဆိုတာမှာသာမန်လူတွေနဲ့ ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓရော ယသောဓရာရောက သာမန်မဟုတ်တာကို သတိထားရလိမ့်မယ်။ ပါရမီတွေ အသချေင်္အနန္တ ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာ အတူတူနေဖို့မဟုတ်ဘူး။
ချစ်တာတွေ မေတ္တာတွေဆိုတာ ဘဝါဘဝပေါင်းများစွာက ပြုခဲ့ ပြခဲ့ပြီးပြီ။
အရင်လိုနေရင် အရင်လိုပဲ ဖြစ်နေဦးမှာပဲလေ
ဒီဘဝမှာထားခဲ့တာက ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ မိသားစုနဲ့
တခြားဘုရင့်မိဖုရားတွေ အခြွေအရံ ကချေသည် မောင်းမပေါင်း ငါးရာလောက်နဲ့
ယသောဓရာမိဖုရားက မောင်းမပေါင်း လေးသောင်းနဲ့စံရတယ်လေ
(((ဒါကိုတချို့က ဘုရားလောင်းက မိန်းမ လေးသောင်းယူထားတယ်ပြောသေး
အရင့်အရင်ဘဝတွေမှာ ?? တစ်ကောင်ကြွက်ဘဝနဲ့
ငတ်တစ်လှဲ့ ပြတ်တစ်လှဲ့ မစားရတစ်လှဲ့နဲ့
ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကြောင့် ဇနီးမယား သမီးသားကို တစ်နယ်တစ်ကျေးမှာ
ထားရပြီး ကိုယ်ကတော့ တစ်ရပ်တစ်ရွာမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းစီးပွားရှာနေတဲ့သူကိုရော
ဗုဒ္ဓ တောထွက်ခြင်းက ဒီထက်နှိုင်းစာလို့မရလောက်အောင် အဆင့်အတန်းကွာတယ်။
မိသားစုလောက်တင်မကဘူး လောကတ္ထစရိယ လောကကောင်းကျိုးအတွက်
အရိုးကြေကြေ အရေခမ်းခမ်း ကြိုးစားပမ်းစား ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တာ ...။
မေးခွန်း၂မှာမေးထားတဲ့ အမေးကတော့ အပေါ်မှာဖြေပြီးပြီပဲ။
ဗုဒ္ဓသတင်းကို နားစွင့်ပြီး ဗုဒ္ဓနေသလို နေပါတယ်ပဲပေါ့ ...။
မေးခွန်း၃မှာမေးထားတဲ့ ယသောဓရာလာမတွေ့လို့ ဗုဒ္ဓက ဝင်တွေ့ရတယ်ဆိုတာလား ~~~
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ သိပ်ပြီး ကျေးဇူးသိတတ်တယ်။
လူတွေမပြောနဲ့ သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ရအောင် အထောက်အပံ့ အရိပ်အာဝါသ
ပေးခဲ့တဲ့ ညောင်ပင်ကိုတောင် ကျေးဇူးသိတယ်
တောထွက်တဲ့ ညက လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ စီးတော်မြင်း ကဏ္ဍကကိုလည်း
ကျေးဇူးသိလို့ မြင်းသေပြီးကဏ္ဍကနတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အခါ တရားဟောပေးလို့
အသင်္ချေအနန္တ ပါရမီဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးပေါ့
ရင်ကွဲနာကကျလို့မရဘူး ယသောဓရာက ပစ္ဆိမဘဝိကာပဲ ဒါကနောက်ဆုံးဘဝ
နောက်ထပ်ဘဝအသစ်မလာတော့ဘူး ဒီတစ်ခါသေပြီး နောက်ထပ်ပဋိသန္ဓေမလာတော့ဘူး
ဒီလိုမလာဖို့ ကံကြွင်းကံစမကျန်အောင် အရဟတ္တမဂ်နဲ့ ဖြတ်မှရမယ် ...။
မေးခွန်း၄မှာမေးထားတဲ့ ယသောဓရာက ဗုဒ္ဓရဲ့ ခြေထောက်ကို
ကိုင်တာ ငိုတာ နမ်းတာ ဗုဒ္ဓအနေနဲ့ အပြစ်မသင့်ဘူးလားဆိုတာက
ယသောဓရာအနေနဲ့ ဒေါသကို မပယ်ရသေးတဲ့အတွက် ငိုတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓအနေနဲ့ကတော့ ရူပက္ခန္ဓာကို သတ္တဝါလို့ သာမန်လူတွေနားလည်အောင် ပညတ်တင်ပြီး
ဟောချင်ဟောပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီလို ပညတ်ပေမယ့် ရူပက္ခန္ဓာအပေါ်မှာ တဏှာ သမုဒယကို အမြစ်မကျန်တွန်းလှန်ပယ်သတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်၊
ဒီလိုပဲ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်ဆိုတဲ့ ခန္ဓာတွေမှာလည်း တဏှာသမုဒယကို
အမြစ်မကျန် တွန်းလှန်ပယ်သတ်အပြီးဖြစ်လို့ ဘယ်ခန္ဓာကိုမှအစွဲပြုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့တောင် စွဲလန်းမှုမရှိတော့ပါဘူး၊ လုံးဝလည်း အပြစ်မဖြစ်ပါဘူး ...။
သိတော်မူမြင်တော်မူ၍ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော
ဉေယျဓံငါးပါး တရားအလုံးစုံကို အကုန်‌အစင်‌ သိမြင်‌‌တော်‌မူ‌သော ဘုန်းတော်ခြောက်ဖုံ ကျေးဇူးဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော နတ်လူဗြဟ္မာသတ္တဝါတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်သော မဖောက်မပြန်သစ္စာဉေယျကို တစ်စမကြွင်း လင်းလင်းထင်ထင် သိမြင်တော်မူသေ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ့်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကို အဉ္ဇလီညွတ် ‌ကျိုးလက်‌အုပ်‌မိုး၍ ရှိခိုးပါ၏ အရှင်‌ဘုရား။
သင်ကြည့်ရှုလိုသော စာမျက်နှာများ မရှိပါ အောက်က မူလစာမျက်နှာကို နှိပ်ပြီး ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Facebook Like နှိပ်ပါ
Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Kike နေရာကို ✔ Like အမှန်လုပ်ပြီလား?
ယ‌သော်‌ဓရာ ဘုရား‌လောင်းရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်‌အဖြစ်‌သိထားတဲ့ ယ‌သောဓရာအ‌ကြောင်း‌လေး နည်းနည်း‌ပြောကြည့်ချင်‌လို့ပါ။ ဒေဝဒဟပြည်ရဲ့ သုပ္ပ...
ထေရဝါဒ ဆိုသည့် စကားလုံးဖြစ်ပေါ်လာသည့် သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့် မည်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်တွင် ပြုလ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ ( ၅ ) မျိုး (ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ)
သင်က ဘယ်နံပါတ်မှာပါ၀င်နေသလဲ ယနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တွေဟာ ဘာသာအသိတရား တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေါင်းပါးလာပြီ။ ဘုရားတောင်မှ ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ဦးချရကောင်း...
ယ‌သော်‌ဓရာ ဘုရား‌လောင်းရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်‌အဖြစ်‌သိထားတဲ့ ယ‌သောဓရာအ‌ကြောင်း‌လေး နည်းနည်း‌ပြောကြည့်ချင်‌လို့ပါ။ ဒေဝဒဟပြည်ရဲ့ သုပ္ပ... ဆက်ရန်
မူပိုင် © 2017 သာသနဝိပုလ | ဝဘ်ဒီဇိုင်နာ အရှင်သုဓမ္မ(မိုင်းပန်)